Orinasa tavoahangy plastika | Mpanamboatra tavoahangy plastika any Sina, mpamatsy
Tavoahangy plastika misy mololo 500ml CY-7002
Tavoahangy plastika LONGSTAR misy mololo, vita amin'ny akora ara-tsakafo, izay azo antoka sy mahasalama. Mety koa ny mampiasa azy, tsindrio fotsiny dia hovohana; Ny famolavolana fikirakirana tsy an-tsoroka indroa, mety ho an'ny zaza ny mitazona azy, koa mety amin'ny mianatra misotro zaza; Amin'ny baolina mahatsapa ihany koa, afaka mihodina 360 ° malalaka, avelao ny zaza hisotro rehefa mandry izy; Miaraka amin'ny fahaizan'ny marika, afaka mifehy ny habetsaky ny fisotroan'ny zaza anao; Miaraka amin'ny lamina mahafinaritra, dia toa tsara tarehy.
Tavoahangy plastika misy mololo 400ml CY-7003
Tavoahangy plastika LONGSTAR misy mololo, vita amin'ny akora ara-tsakafo, izay azo antoka sy mahasalama. Mety koa ny mampiasa azy, tsindrio fotsiny dia hovohana; Ny volavolan-tànana avo roa heny, mety ho an'ny zaza ny mitazona azy, ary mety koa ho an'ny zaza mianatra misotro; Amin'ny baolina mahatsapa ihany koa, afaka mihodina 360 ° malalaka, avelao ny zaza hisotro rehefa mandry izy; Miaraka amin'ny fahaizan'ny marika, afaka mifehy ny habetsaky ny fisotroan'ny zaza anao; Miaraka amin'ny lamina mahafinaritra, dia toa tsara tarehy.
Tavoahangy plastika misy mololo 540ml CY-7005
Tavoahangy plastika LONGSTAR misy mololo, vita amin'ny akora ara-tsakafo, izay azo antoka sy mahasalama. Miaraka amin'ny famolavolana 3D sy ny famolavolana modely, dia toa velona sy tsara tarehy izy; Ny famolavolana fikirakirana tsy an-tsoroka indroa, mety ho an'ny zaza ny mitazona azy, koa mety amin'ny mianatra misotro zaza; Amin'ny baolina mahatsapa ihany koa, afaka mihodina 360 ° malalaka, avelao ny zaza hisotro rehefa mandry izy; Miaraka amin'ny fahaizan'ny marika, afaka mifehy ny habetsaky ny fisotroan'ny zaza anao; Ary koa miaraka amin'ny mololo, dia mety ho an'ny zaza ny mianatra misotro.
Tavoahangy plastika misy mololo 620ml CY-7006
Tavoahangy plastika LONGSTAR misy mololo, vita amin'ny akora ara-tsakafo, izay azo antoka sy mahasalama. Miaraka amin'ny famolavolana 3D sy ny famolavolana modely, dia toa velona sy tsara tarehy izy; Amin'ny baolina mahatsapa ihany koa, afaka mihodina 360 ° malalaka, avelao ny zaza hisotro rehefa mandry izy; Miaraka amin'ny fahaizan'ny marika, afaka mifehy ny habetsaky ny fisotroan'ny zaza anao; Ary koa miaraka amin'ny mololo, dia mety ho an'ny zaza ny mianatra misotro; Miaraka amin'ny base PP, tsy mitongilana izy io; Miaraka amin'ny tady azo esorina, mety any ivelany izy io.
Tavoahangy plastika misy mololo 290ml CY-7007
Tavoahangy plastika LONGSTAR misy mololo, vita amin'ny akora ara-tsakafo, izay azo antoka sy mahasalama. Ny famolavolana fikirakirana tsy an-tsoroka indroa, mety ho an'ny zaza ny mitazona azy, koa mety amin'ny mianatra misotro zaza; Amin'ny baolina mahatsapa ihany koa, afaka mihodina 360 ° malalaka, avelao ny zaza hisotro rehefa mandry izy; Miaraka amin'ny fahaizan'ny marika, afaka mifehy ny habetsaky ny fisotroan'ny zaza anao; Ary koa miaraka amin'ny fonony misavoana amin'ny mololo, dia mety ho an'ny zaza ny mianatra misotro; Miaraka amin'ny base PP, tsy mitongilana izy io; Miaraka amin'ny lamina mahafinaritra, toa bea ...
Tavoahangy plastika misy mololo 290ml CY-7001
Tavoahangy plastika LONGSTAR misy mololo, vita amin'ny akora ara-tsakafo, izay azo antoka sy mahasalama. Mety koa ny mampiasa azy, tsindrio fotsiny dia hovohana; Ny volavolan-tànana avo roa heny, mety ho an'ny zaza ny mitazona azy, ary mety koa ho an'ny zaza mianatra misotro; Amin'ny baolina mahatsapa ihany koa, afaka mihodina 360 ° malalaka, avelao ny zaza hisotro rehefa mandry izy; Miaraka amin'ny lamina mahafinaritra, dia toa tsara tarehy.
Tavoahangy plastika 530ml CK-8053
Tavoahangy plastika LONGSTAR, vita amin'ny akora ara-tsakafo, izay azo antoka sy salama; Miaraka amin'ny endrika tsy manam-paharoa, mahatsapa mahazo aina izy; Miaraka amin'ny famolavolana tady, mora entina izy, mety amin'ny ety ivelany sy ny dia.
Tavoahangy plastika 700ml (L) CK-8039
Tavoahangy plastika LONGSTAR, vita amin'ny akora ara-tsakafo, izay azo antoka sy salama; Miaraka amin'ny endrika tsy manam-paharoa, mahatsapa mahazo aina izy; Miaraka amin'ny famolavolana fikirakirana manainga, azo entina izy io, mety ho an'ny ety ivelany sy ny dia.
Tavoahangy plastika 550ml (S) CK-8027
Tavoahangy plastika LONGSTAR, vita amin'ny akora ara-tsakafo, izay azo antoka sy salama; Miaraka amin'ny endrika tsy manam-paharoa, mahatsapa mahazo aina izy; Miaraka amin'ny famolavolana peratra fananganana, azo entina izy io, mety ho an'ny ety ivelany sy ny dia.
Tavoahangy plastika 1000ml (L) CK-8033
Tavoahangy plastika 580ml (S) CK-8031
Tavoahangy plastika misy mololo 450ml (L) CK-8036
Tavoahangy plastika LONGSTAR misy mololo, vita amin'ny akora ara-tsakafo, izay azo antoka sy mahasalama. Mora ny manokatra azy, tanana iray monja no ok; Miaraka amin'ny famolavolana tady dia azo entina.